Ny AS Travel Association dia miarahaba ny fitantanan'i Trump amin'ny fanambarana nataon'ny CEO
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny AS Travel Association dia miarahaba ny fitantanan'i Trump amin'ny fanambarana nataon'ny CEO
“Ny vondron'olona mpanao dia lavitra amerikana dia mandray ny fanambarana an'i Chad Wolf ho talen'ny departemantan'ny Security Homeland. Amin'ny maha-mpiasam-panjakana feno fanoloran-tena izay efa niasa ara-bakiteny tamin'ny departemanta hatramin'ny voalohany, Andriamatoa Wolf dia manana fahatakarana manokana momba ny asany sy ny tanjony - indrindra indrindra, ny zavatra ilaina mba hivoarana am-pahombiazana politika iray hiatrehana ireo fanamby miovaova tsy tapaka eo amin'ny tontolon'ny fiarovana. . "
Ity dia fanambarana navoakan'ny filoham-pirenena amerikana sy ny CEO an'ny Travel Association Roger Dow izay namoaka izao fanambarana izao:
"Rehefa mandroso miaraka amin'ny fanavaozana ny DHS izay hahatonga ny dia lavitra miaraka tsy hisy hatahorana sy azo antoka kokoa - toy ny fampiharana ny haitao biometrika na amin'ny Security Security Administration sy Customs and Border Protection - dia matoky izahay fa Andriamatoa Wolf no hitondra ny mpitarika mahay izany dia hahomby amin'ireo ezaka ireo.
"Manampy ny fisaoranay an'i Kevin McAleenan izahay, izay ny asam-panjakana lava sy malaza dia nanao zavatra betsaka mba hampilamina ity firenena ity, ary niara-niasa tamina olana lehibe momba ny dia tamin'ny fotoanany nitarika ny DHS sy nandritra ny asany manontolo."
Wolf dia talohan'ny mpiasa tao amin'ny sekreteran'ny fiarovana an-tanindrazana taloha Kirstjen Nielsen. Notendren'i Trump izy tamin'ny volana febroary mba ho minisitry ny sekretera ambanin'ny birao misahana ny paikady, ny politika ary ny drafitra ao amin'ny DHS, andraikitra iray izay nofenoiny andraikitra teo amin'ny sehatry ny asa. Mbola miandry ny fanamafisan'ny Antenimieran-doholona azy momba io toerana io izy.
Nandritra ny fihainoana ny tenin'ny Senatera momba ny andraikitry ny sekretera ambany, Wolf dia niatrika ny fanontaniana momba ny andraikiny amin'ny politikam-pizakana tsy misy fandeferana izay nahatonga ny ankizy an'arivony tafasaraka tamin'ny ray aman-dreniny tany amin'ny sisintany.
Rehefa nanontaniana izy raha manana ahiahy momba ny politika izy tamin'izany fotoana izany dia nilaza i Wolf hoe: “Ny asako dia tsy ny mamaritra hoe politika mety na tsia. Ny asako tamin'izany dia ny miantoka ny fananan'ny sekretera ny vaovao rehetra. ”
Fomba vaovao Koreana Airlines hampitana ny fiarovana
Manatsara ny fizahantany any amin'ny toeram-piarovana biby i Oganda ny fifindrana zirafy